HERO OF MYANMAR: ကိုယ်ကိုကိုယ် မရိုးသားတဲ့ သူတွေ ပြည်တော်ပြန်ဖို့ ခက်ပါလိမ့် မယ်
ကိုယ်ကိုကိုယ် မရိုးသားတဲ့ သူတွေ ပြည်တော်ပြန်ဖို့ ခက်ပါလိမ့် မယ်
[13:38 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
"အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြည်ပကို ရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားများကိုလည်း ပြစ်မှု တစ်စုံတစ်ရာ ကျူးလွန် သွားတာမရှိဘူးဆိုရင် အချိန်မရွေးပြန်လာနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြစ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့သည့်တိုင် ထိုက်သင့်တဲ့ ပြစ်မှုခံယူဖို့ ပြန်လာမယ်ဆိုရင်တောင် ကျွန်တော်တို့ သဘောထားကြီးစွာနဲ့ စဉ်းစားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးသားတဲ့ စိတ်ရင်းစေတနာရှိသူတိုင်းဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ချစ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကောင်းစားစေလိုကြပါတယ်။ " ဆိုပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ မိန်းခွန်းမှာ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြည်ပကို ရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာများ ပြန်လာနိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့ပေမယ့်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြည်ပကို ရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာများက ပြန်မလာချင်တာကြောင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုး ပြနေကြပြန်ပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီး ဝရမ်းပြေးဖြစ်နေသူများကိုတောင် သဘောထားကြီးစဉ်းစားမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပြည်ပရောက် မြန်မာအများစုက မပြန်ချင်တာကြောင့် အကြောင်းတွေ အမျိုးမျိုး ပြနေကြတယ် လို့ ဝေဖန်သူတွေက ပြောပါတယ်။
ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံများအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးခိုလုံခွင့်ရဖို့ အပြင်းအထန် ကြိုးစားခဲ့ရကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပါတ်သက်ဖူးသူများကလည်း နိုင်ငံရေးနဲ့ပါတ်သက်ဖူးတာကြောင့် ပြန်သွားရင် အစိုးရက ဖမ်းမှာပဲ လို့ အကြောင်းပြကာ ရောက်ရာအရပ်မှာပဲ ဇိမ်ကျကျနေချင်ကြကြောင်း။ ပြည်ပရောက်နိုင်ငံရေးနဲ့ပါတ်သက်သူများထဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လောက် အရေးပါသူ မရှိကြောင်း။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထက် အရေးပါတယ်ထင်နေကြကြောင်း၊ အခုလက်ရှိ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တစ်ယောက်လုံးကိုတောင် နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်တွေ သွားခွင့်၊ မိန်းခွန်းတွေ ပြောခွင့် ပေးထားတာကို အားလုံးသိနိုင်ကြောင်း။ ဒါက မြန်မာနိုင်ငံကို မပြန်ချင်တာကြောင့် အကြောင်းပြချက် သက်သက်သာဖြစ်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
"ရီတော့ ရီရတယ်ပြ... တချို့ကပြောကြတယ် သူတို့ကနိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေပေါ့.. ပြန်သွားရင်အဖမ်းခံရမယ်ပေါ့...။ ကျွန်တော်မေးချင်လိုက်တာဗျ... နိုင်ငံရေးမှာ ခင်ဗျားတို့က ဘယ်လောက်များအရေးပါနေလို့တုန်းလို့...။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ ရက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်
အစိုးရအတိုက်အခံတွေထဲမှာ ခေါင်းဆောင်းဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတောင် အစိုးရက မဖမ်းတဲ့အပြင် ခရီးစဉ် ဖြောင့်တန်းချောမွေ့ရေးအတွက်က လုံခြုံရေး လုပ်ပေးနေတာ... ခင်များတို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထက်အရေးပါတယ်လို့များ ပြောချင်တာလား... လို့ မေးလိုက်ချင်ပါတယ်.. တကယ်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နာမည်ပြပြီး လုပ်စားနေကြသူတွေချည်းပဲ... နိုင်ငံရေးခိုလုံဖို့ဆိုတာ လွယ်တာမှမဟုတ်တာ.. UNHCR က မြန်မာအချင်းချင်းကို အမျိုးမျိုးကျစ်တယ်၊ စစ်တယ်ဗျ.. ၁၀ ကြိမ်လောက် အပယ်ခံပြီးမှ တစ်ကြိမ် ကံကောင်းလို့ပါသွားတဲ့လူတွေက ဘယ်လိုလုပ် ပြန်ချင်မှာတဲ့တုန်း... ပြီးတော့ သူတို့တွေက ဒီဖက်မှာ နေသားကျနေကြပြီ။ တစ်ဆွေလုံး တစ်မျိုးလုံးတောင် ခေါ်တဲ့လူတွေ ခေါ်နေပြီး ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့လူတွေ လုပ်နေကြပြီ... ဒီတော့ အစိုးရဖမ်းမှာကြောင့် မပြန်တာလို့အကြောင်းပြရတာပေါ့" လို့ ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီးစဉ် ချောမွေ့ရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ယဉ်ထိန်းရဲ အရရှိတစ်ဦး
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးထားတာ ၁၀ လနီးပါးရှိပြီဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်များမှာတောင် အစိုးရက လုံခြုံရေးတွေ စီစဉ်ပေးနေပါတယ်။ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့နလည်း တွေ့ဆုံခွင့်ပေးပြီး အရေးပါတဲ့ အစည်းအဝေးတွေမှာတောင် ဖိတ်ကြားထားတာတွေ ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံခြားမှာ ပျော်ပါး စေားသောက်နေကြသည့် BDC အဖွဲ့သားများ
နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတစ်ဦးကတော့ မီးပုံမှန် ပြန်လာမဲ့အချိန်၊ အင်တာနက်ကို ယူကျူ.အစရှိသည်များကို မပိတ်ပင်တော့တဲ့ အချိန် ၊ လမ်းတွေ ပြန်ကောင်းမဲ့အချိန် ၊ ဆေးရုံမှာ ပတ်တီး၊ ဂွမ်း စသည်များကို စရိတ်သက်သာစွာနဲ. အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်မဲ့အချိန် ၊ အတင်းအကျပ်၊ မထည့်မနေရ အလှူခံ မကောက်တော့မယ့် အချိန် ၊ ကိုယ်ပိုင်ကားကို လွတ်လပ်စွာ တရားဝင် ဝယ်စီးနိုင်မဲ့အချိန် ၊ ဖုန်းကဒ်ကို လမ်းဘေးဆိုင်တွင် လွယ်ကူသက်သာစွာ ဝယ်ယူနိုင်မယ့် အချိန် ၊ လစာ ကောင်းကောင်း ရတဲ့အချိန် ကျမှ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာမယ် လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံခြားပြန် ပါရဂူဘွဲ့ရ ပညာရှင်တစ်ဦးက
"အဲ့လိုလူတွေက အများကြီးရှိတယ်... နိုင်ငံတော်အတွက် ဘာမှလုပ်မပေးတဲ့အပြင် နိုင်ငံတော်ဖက်က ပြည့်စုံမှ ပြန်လာမယ် ဆိုတာတွေပေါ့... ဒီလိုလူတွေ ထုနဲ့ဒေးရှိတယ်... နိုင်ငံတော်ထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပိုချစ်ကြတယ်... နိုင်ငံရဲ့ရှေ့ရေးကို လုံးဝ မကြည့်ဘူး၊ ကိုယ့်ရှေ့ရေးကိုကြည့်တယ်... ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံသားတွေ အတွက် အလုပ်မလုပ်ပေးဘူး၊ သူများနိုင်ငံက နိုင်ငံသားတွေကို အလုပ်အကျွေးပြုတယ်... ပြည်သူတွေကို ကိုယ်ချင်းမစာဘူး... ဒါမျိုးစိတ်ရှိတဲ့လူတွေကတော့ ပြန်လာဖို့ ဘယ်လိုနားလည်အောင် ပြောပြော ပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူး... သူတို့က အခွင့်ရေး သမားပဲလေ... သူတို့လိုချင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကိုပြောထားတာပဲ.. " လို့ ဆိုပါတယ်။
"မြန်မာပြည်သူအတွက် လုပ်ချင်ရင် လုပ်လို့ရတာတွေ အများကြီးရှိတယ်ဗျ.. သူတို့ကို ဘယ်သူကမှ အတင်းရိုက်ပြီး နိုင်ငံခြား မသွားခိုင်းဘူးလေ.. သူတို့ဘာသာ မရမက သွားကြတာ.. ပြန်လာရင် လည်းဘယ်သူကမှ ဘာမှမလုပ်ဘူး.. သူတို့ဘာသာ လျှောက်ပြီးအကြောင်းပြနေကြတာ" လို့ နာရေးကူညီမှုအသင်းမှ လုပ်အားပေးလူငယ်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရောက် ပြန်မာတွေက နိုင်ငံကို စောင့်ရှောက်ဖို့၊ ပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ ဆိုတာတွေကို လုံးဝ မစဉ်းစားကြပါဘူး။ ယုတ်စွ အဆုံး ကိုယ့်အမျိုးဂုဏ်တောင် ကိုယ်မစောင့်ထိန်းတော့ပါဘူး။ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် နိုင်ငံခြားသားတွေကို ယူနေကြတာ အားလုံးသိနေတာပါပဲ။ အစိုးရ မကောင်းလို့ နိုင်ငံခြားသားကို ယူကြတာမှ မဟုတ်ပဲ သူတို့သဘောနှင့်သဘောသာ ယူကြတာဖြစ်ကြောင်းကို စင်္ကာပူနိုင်ငံရောက် မြန်မာမိန်းခလေး တစ်ဦးဖြစ်သည့် မဝင့်က "ယူနေကြတာပဲလေ.. အများကြီး.. တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ပဲ... လမ်းမှာဆိုတွေ့တွေ့နေရတယ်.. တစ်ချို့ဆိုရင် အိမ်ထောင်ရှိပြီးသား သူဌေးတွေနဲ့တောင် ယူကြတယ်.. မြန်မာမ အပျိုလေးတွေက ယူတာနော်.. အရမ်းအံ့သြဖို့ကောင်းတယ်... စလုံးမှာတင်မဟုတ်ပါဘူး... နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာအကုန်လုံး မြန်မာအချင်းချင်းဆိုရင် လမ်းတွေ့ရင်တောင် ဝေးဝေးရှောင်တယ်.. မြန်မာတွေပဲနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပါးစပ်ကတော့ ပြန်ချင်တယ်ပေါ့... တကယ်တမ်းပြန်ခိုင်းတော့ ဘယ်သူမှ မပြန်ကြပါဘူး..." လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီလူတွေကို ယူပြီး ဒီလိုနေတာ ဟာ အစိုးရကို မကျေနပ်လို့၊ ပြန်သွားရင်ဖမ်းမှာဆိုးလို့ ပါ
(သနားပါတယ် စိတ်ညစ်နေရှာတဲ့ မျက်နှာပဲ ပိန်တောင်ပိန်နေပြီ)
ဒါအပြင် မြန်မာလို့တောင် ပြောဖို့ ရှက်နေတဲ့သူတွေ ရှိကြောင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မြန်မာလို့မခံယူပဲ ပျက်ဆီးနေတဲ့ မြန်မာတွေ ရှိကြောင်းကို " တချို့ကျတော့ မြန်မာချင်းတွေ့လို့ နှုတ်ဆက်ရင်တောင် သူက မြန်မာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောင်လိမ်ကြတယ်.. အသိသာကြီးကို.. ခဏခဏ ပဲ ကြုံဖူးတယ်... ပြီးတော့ Living Together နေကြတယ်လေ... အပြင်မှာလဲ နေကြတယ်၊ အွန်လိုင်းမှာလဲ ရည်းစားတွေ အများကြီးပဲ... အဲဒါ ယောက်ျားလေးတွေတင် မဟုတ်ဘူး မိန်းခလေးတွေလည်း အတူတူပဲ... ပြီးရင် အကျင့်မကောင်းတဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေက အတူနေပြီး ဗွီဒီယိုတွေ ရိုက်ထားကြပြီး အင်တာနက်ပေါ် တင်ကြပြန်တယ်... လူငယ်တွေရော လူကြီးရော.. အရမ်းကို ပျက်ဆီးနေကြပြီ..." လို့ မဝင့် က ဆက်ပြောပါတယ်...။ "
နိုင်ငံကိုစွန့်ခွာပြီး ပြည်ပမှာ အလုပ်အကျွေးပြုနေသူအများစုမှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာဖြစ်ပြီး ထိုင်း၊ မလေးရှား နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတွေ မှာ လည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေ အများဆုံးလုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့ အိမ်ပေါ်၊ သန့်ရှင်းရေး၊ စားပွဲထိုး နဲ့ တခြား အလုပ်ကြမ်းတွေ များပါတယ်။
"မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးထားတဲ့လူ တစ်ယောက်မှမရှိဘူး... အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေက ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့အပြစ်ကိုယ် ပြန်ခံ ရမှာ ကြောက်လို့ နိုင်ငံခြား ထွက်ပြေးတာပဲရှိတယ်" လို့ ရဲ တပ်သားတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။
UNHCR အဖွဲ့ဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကနေ အခုချိန်အထိ ဒုက္ခသည် အမည်ခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ မနေချင်ပဲ နိုင်ငံခြားမှာ အခြေချပြီး နေထိုင်ဖို့ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် လာရောက်လျှောက်ထားသူပေါင်း ၇၀,၀၀၀ ကျော်ကို တတိယနိုင်ငံတွေ ပို့ပးခဲ့ရပါတယ်။
အစိုးရကို မကျေနပ်လို့ ဘောင်းဘီရှည်ဝတ် ဆံပင်ဂုတ်ဝဲထားပြီး ဘဝမေ့နေတဲ့ ငယ်နိုင်
အစိုးရကို မကျေနပ်လို့ ဘောင်းဘီတိုပဲဝတ်တယ်
၁၈ . ၈ . ၂၀၁၁ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းများ
ဧရာဝတီမြစ်ရေကာတာစီမံကိန်းများ ရပ်တန့်ရေး သမ္မတထံ မေတ္တာရပ်ခံသည့် လှုပ်ရှားမှု စတင် click
- ဧရာဝတီမြစ် ကာကွယ်ရန် လူထုထောင်ချီ လက်မှတ်ထိုး click
- စီးပွားရေးဆွေးနွေးပွဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖိတ်ကြား click
- ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖိတ်ကြား click
- ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း click
- မြန်မာအစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အခွန်ကြေညာချက်များ ထုတ် click
- ဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်း click
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစည်းအဝေးမှာ လက်တန်းပြောဆိုတာ ယုံကြည်လို့ မရနိုင် click
- ဦးသိန်းစိန်မိန့်ခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုမိုးသီးဇွန်နဲ့ မေးမြန်းချက် click
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကျော်သူ့ပရိသတ်ပါတဲ့ click
- သမ္မတ ပြောသည့် ဌာနေပြန်ရေး လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ မယုံကြည် click
- သမ္မတ၏ ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို အယုံကြည်မရှိဟု တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ပြောဆို click
- သမ္မတ မိန့်ခွန်းကို ကြိုဆိုပေမယ့် ပိုလုပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ တုံ့ပြန်ကြ click
- သမ္မတ ပြည်တော်ပြန် မိန့်ခွန်း ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံများ ဝေဖန် click
- ပြည်​တော်ဝင်ဖို့ အခါ​တော်​ရောက်ပြီလား​ (အထူးကဏ္ဍ) click
လက်တွေ့လုပ်ရပ်ဖြင့်သာ မြန်မာအစိုးရသစ်ကို အကဲဖြတ်မည် click
- DKBA မြို့တွင်းတိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲမယ် click
- မြန်မာအစိုးရအပေါ် ကေအိုင်အို တုံ့ပြန်ကန့်ကွက် click
- မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့သစ်၏ ထုတ်ပြန်ချက်ကို KIO ပယ်ချ click
- ပြည်နယ်အဆင့်နှင့်သာ ဆွေးနွေးလိုခြင်းအပေါ် KIO ဝေဖန် click
- ကချင်လူထုနှင့် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ကြား ဆက်ဆံမှုလမ်းကြောင်း ပျက်အောင် သမ္မတ ပြောဟုဆို click
- မြန်မာတပ်နှင့် KIA ကြား ၀ါဝမ်ကွမ်ဘန်တွင် မနက် စစ်ပွဲဖြစ် click
- မုံးဟ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ရုံး မူစယ်မြို့၌ ဖွင့်လှစ် click
- အစိုးရစစ်ကြောင်းလုံခြုံရေး ရွာသားနှင့် ကျောင်းသားများကို အကာအကွယ်ပြု click
- ကျေးလက်လူထုအား ကာဗာလုပ်၊ ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲမှ မြန်မာစစ်ကြောင်း တပ်ဆုတ် click
- ငြိမ်းချမ်းရေးကို စစ်ရေးနည်းဖြင့် မတည်ဆောက်နိုင်ဟု မွန်ခေါင်းဆောင် ပြော click
- တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် အစိုးရစစ်တပ်က မြေယာအဓမ္မ သိမ်းဆည်းနေ click
- လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စ ပင်လုံစာချုပ်မှ စတင် click
- လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ တိုင်မည့် NLD အစီအစဉ် ကြန့်ကြာနေ click
- ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေများပါတီနှင့် ဂျွန်ကယ်ရီ၏ အကြံပေးအဖွဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ click
- ပါတီများ၏ လှုပ်ရှားမှုကို အမေရိကန်က အလေးထားစေရေး ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေပါတီများ တိုက်တွန်း click
- သတင်းများ မရရှိသည့် ကရင်နီပြည်တွင် ရေဒီယို ပေးဝေ click
- လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို မြန်မာမီနီဆလွန်းကား ရောင်းချပေး click
- ရင်ထဲက ရှစ်ဆယ့်ရှစ် - အပိုင်း (၄) (ဆောင်းပါး) click
- ရင်ထဲက ရှစ်ဆယ့်ရှစ် - အပိုင်း (၃) (ဆောင်းပါး) click
- သိသိကြီးနဲ့ ခံလိုက်ရတယ် (ဆောင်းပါး) click
- ဒို့ပြည်ထောင်စု လူထုရေ ... (ပေးစာ) click
သမ္မတမိန့်ခွန်းကို ကြိုဆိုပေမယ့် ပိုလုပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ တုန့်ပြန်ကြ - ဘီဘီစီ click here
လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ တိုင်မည့် NLD အစီအစဉ် ကြန့်ကြာနေ - မဇ္ဈိမ click here
ဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်း - မဇ္ဈိမ click here
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖိတ်ကြား - မဇ္ဈိမ click here
တရုတ်ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် စတင် - ဧရာဝတီ click here
နယ်စပ်တွင် စက်မှုဇုန်ထောင်မည် - ဧရာဝတီ click here
ကချင်လူထုနှင့် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ကြား ဆက်ဆံမှု လမ်းကြောင်း ပျက်အောင် သမ္မတပြောဟုဆို - ဒီဗွီဘီ click here
နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ လှုပ်ရှားမှုကို အမေရိကန်က အလေးထားစေရေး ဒီမိုကရေစီ မိတ်ဆွေပါတီများ တိုက်တွန်း - ခိုနှုမ်းထုန် click here
တိုင်းရင်းသား ဒေသများတွင် အစိုးရစစ်တပ်က မြေယာအဓမ္မ သိမ်းဆည်းနေ - မွန်သတင်းအေဂျင်စီ click here
ဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုမိုးသီးဇွန် နဲ့ မေးမြန်းချက် - နေ့သစ် click here
ဒုက္ခသည်ကို မကူညီရန် အစိုးရပိတ်ထားသည်ဟု ကချင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ပြောဆို - ကေအိုင်စီ click here
သမ္မတဦးသိန်းစိန် ငြိမ်းချမ်းရေး တံခါးဖွင့်ထားကြောင်း ပြောကြား - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေကို အစိုးရက ပြန်ခေါ် - ဘီဘီစီ click here
ဆောင်ပုဒ်ဖျက်ရုံဖြင့် မီဒီယာလွတ်လပ်မည်မဟုတ်ဟု မြန်မာသတင်းသမားများ ပြောဆို - ကေအိုင်စီ click here
နေပြည်တော် စီးပွားရေး ဆွေးနွေးပွဲ ကို ပညာရှင်တွေ အားထားနေကြ - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဌာနေ ပြန်လာခွင့်ပြု - ဗွီအိုအေ click here
ဌာနေပြန်ရေး နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်ခွင့် လိုအပ်ဟု ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံများ တုံ့ပြန် - ဗွီအိုအေ click here
အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်ကယ်ရီ အကြံပေး မြန်မာနိုင်ငံ ရောက်ရှိ - ဗွီအိုအေ click here
မြန်မာရောက် အမေရိကန်အဖွဲ့ ပါတီတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ - ဘီဘီစီ click here
အမေရိကန်အရာရှိက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဦးအောင်ကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲအကြောင်း မေးမြန်း - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
မြန်မာအစိုးရအပေါ် လက်တွေ့လုပ်ရပ်ဖြင့်သာ ကြည့်မည် - ဗွီအိုအေ click here
အိမ်ဖြူတော်၏ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်အမေရိကန်များ အခြေပြုကော်မရှင် ဦးဆောင်သူက ဘေးဧရိယာမြန်မာများကို တွေ့ဆုံမည် - မိုးမခ click here
တော်လှန်ရေးကို ကူညီပံ့ပိုးကြရန် ကရင်နီပြည်သူများကို KNPP တိုက်တွန်း - ကေအိုင်စီ click here
နိုင်ငံခြား ငွေလဲလက်မှတ် FEC ဈေးနှုန်း မတည်ငြိမ် - ဗွီအိုအေ click here
ပြည်ပရောက်များ ပြန်လာရန်နှင့် လက်နက်ကိုင်များ လက်နက်ချရန် ဦးသိန်းစိန်ပြော - မဇ္ဇိမ click here
ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြန်လာကြရန် သမ္မတကမ်းလှမ်း - ဒီဗွီဘီ click here
အကူအညီများကို မြန်မာအစိုးရ ပိတ်ပင်ဟု ကချင်ပြော - ဧရာဝတီ click here
သမ္မတက အဖွဲ့ပေါင်းစုံကို ခေါ်တွေ့ - ဧရာဝတီဘလော့ click here
နေပြည်တော် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပါတီတွေကိုဖိတ် - မဇ္ဈိမ click here
မစ္စတာ ကင်တားနား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့မည် - ဧရာဝတီ click here
အမျိုးသားဆင့် အကောင်းဆုံးသတင်းဆု ပထမဆုံးပေးမည် - မဇ္စျိမ click here
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနှင့် ပါသတ်၍ KIO ဗဟိုကော်မတီ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် - ကေအန်င်ဂျီ click here
KIO နှင့်ဆွေေးနွးပွဲ နောက်ကွယ် မြန်မာစစ်တပ် အင်အားဖြည့်တင်း - သျှမ်းသံတော်ဆင့် click here
အပြစ်မဲ့ ကလေးတဦးအား မြန်မာစစ်သားများ ပစ်သတ် - ကေအန်င်ဂျီ click here
အစိုးရကို SSA-N ပြန်လည်စွပ်စွဲ - မဇ္ဈိမ click here
သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ နှစ်(၄၀) ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား ဝမ့်ဟိုင်းဌာနချုပ်၌ကျင်းပ - သျှမ်းသံတော်ဆင့် click here
ကရင်ဒေသထိုးစစ် ပိုများလာဖွယ်ရှိ - ဧရာဝတီ click here
ကရင်နီပြည်တိုက်ပွဲ အစိုးရတပ်မှ ဒု-တပ်ကြပ် ကျဆုံးဟုဆို - ကန္တာရဝတီတိုင်းမ် click here
ကရင်နီတပ်မတော်နေ့အခမ်းအနား တပ်စခန်းနှစ်ခုတွင် တပြိုင်နက်ကျင်းပ - ကန္တာရဝတီတိုင်းမ် click here
ရှမ်းနှင့် ကချင်ခေါင်းဆောင်များ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တောင်းဆို - သတင်းနှင့် မီဒီယာကွန်ယက် click here
အစိုးရနှင့် အန်အယ်ဒီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုင်းရင်းသားများအတွက် မဖြစ်နိုင်သေး - မွန်သတင်းအေဂျင်စီ click here
ညီနောင် ၅ ပါတီမှ နှုတ်ထွက်ရန် မွန်ပါတီကို ဝန်ကြီးချုပ် ဖိအားပေး - မွန်သတင်းအေဂျင်စီ click here
ပြည်ပ NGO များ၏ ကျန်းမာရေး အကူအညီကို လက်မခံရန် ချင်းအာဏာပိုင်များက သတိပေး - ကောင်းဝါ click here
ရေလုပ်သားများ အသက်အာမခံ ရရှိရေး ကြံ့ဖွံ့ အဆိုတင်မည် - မဇ္ဈိမ click here
စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးဖို့ အခွန်လျော့ကောက်မည် - မဇ္ဈိမ click here
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား (မှတ်ပုံတင်) အတွက် ငွေကျပ် ၅၀၀၀ ပေးဆောင်ခဲ့ကြ - မွန်သတင်းအေဂျင်စီ click here
မော်လမြိုင် -ဘားအံ- ရွှေဂွန်း သံလွင်မြစ်တွင်းသင်္ဘော အရှုံးပေါ်၍ရပ်နား - မွန်သတင်းအေဂျင်စီ click here
ကျပ်သိန်း ၂၀၀ တန် တွီးငို ချောင်းတံတား ရေလွှမ်းပျက်စီး - ကောင်းဝါ click here
မန္တလေးတွင်လည်း ရေကြီး - မဇ္ဈိမ click here
ဘာသာပေါင်းစုံ ကရုဏာရှင်များအဖွဲ့ ပဲခူး ရေဘေးဒုက္ခသည်များအား ကူညီမည် - သတင်းနှင့် မီဒီယာကွန်ယက် click here
ရခိုင်၏ စီးပွားရေး အရ အချက်အချာကျ နေရာများ လူမျိုးခြားများ လက်သို့ ရောက်ရှိနေ - နိရဉ္စရာ click here
ကျောင်းလှူပြီး ထိန်းသိမ်း စရိတ် မထောက်ပံ့သဖြင့် ကျောင်းသားများထံမှ ငွေကောက် - နိရဉ္စရာ click here
မူဆယ်ကဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်မဆောင်းတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်သေးပါ - သျှမ်းသံတော်ဆင့် click here
ဒီမနက် ဖုတ်ဖရမြို့နယ်ထဲမှာ အဖမ်းအဆီးကြမ်း - နေ့သစ် click here
ဆရာကြီး ဦးဦးသာထွန်းနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အနှံ့အပြားတွင် ကျင်းပ - နိရဉ္စရာ click here
မြန်မာအစိုးရတပ် နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တိုက်ပွဲ တိမ်းရှောင်ရေး ထိုင်းနယ်စပ် ဒေသခံ များအား ထိုင်းစစ်တပ်သင်တန်းပေး - သျှမ်းသံတော်ဆင့် click here